Lucky iwe - wawana munhu chinoshamisa inovaka rudo rwenyu mafirimu, ane pfungwa huru zvinosetsa, uye adores mhuka. Kana uri inoyerera zuva usiku pfungwa uye vachiongorora ose kudanana kwavaizoenda, wadii itange vamwe vakanaka sezvo vaviri, kunyanya kana nokupinza zvinhu iwe vanotova? Hedzino dzimwe pfungwa dziri nzira unogona kumubatsira, zvose pamwe rubatsiro mudiwa wako:
1.) Photography: Vachamhanyira matumba nokusunungura kazhinji vanoda rubatsiro anokunda unhu mifananidzo ano mhuka dzavo dziripo kuitwa. Ko iwe kana mudiwa wako ari mwene Instagram, kana kuita imi vanoda kutsanangura vazukuru uye outs pamusoro aperture? Izvi zvinogona kuva wakakodzera zvikuru kwamuri, uye inogona nyore mutsauko kwenhamba mhuka ichigamuchirwa. Contact pamunogara kuona kana uchikwanisa kupa minamato yenyu, uye kugoverana zviso iwayo akanaka pamusoro pasocial network nzvimbo kubatsira kuzviwana misha.
2.) kuchenesa: Sick pamusoro ungwanda? Zviri nyore chaizvo kuti kuunganidza sezvo vaviri zvinhu zvakawanda, saka kutora mukana kuchenesa imba uye kupa zvinhu zvaidiwa kuti dzinochengeterwa omunharaunda uye nokusunungura. matauro, magumbezi, mapepanhau, ndiro, placemats, uye zvakawanda zvinogona zvose kuratidza kubatsira mapoka aya. Vapei kudanwa, uye ona kuti vanoda. Muchava kubatsira navo zvokuyamura ndichireurura musha wako zvikuru yakarongwa.
3.) Cooking: Kuzvicherera nyama uye / kana mhuka zvinogona liven kumusoro zvokudya zvenyu pamwe chete. Jay-Z uye Beyonce akazviita, saka wadii iwe? Kueche uye miriwo zvinotora uri kufarira midziyo inogona kuita Pizza usiku kure kunakidza, uye mararamiro ichi anopa nzira siyana itsva culinary uye resitorendi adventures. Kuzviita mhuka, nokuti utano hwako, kana chete kuti nokupinza zvakawanda zvibereko kupinda kunodya zvinenge yenyu. Chero nzira, zviri zvinobatsira - uye zvinonaka!
4.) famba: Ita vaviri waunoda kurova nomugwagwa? Chiri kufamba kwenyu chido mazita, asi iwe usambofa sokuti kuti zviitike? matumba zhinji nokusunungura vanoda transports pakati kwadzinowanika uye nedzimwe nokusunungura kana misha vokugara. Kana uri kubuda muguta racho, kana iwe ndichida kuona chimwe chikamu ehurumende, kupa kutakura mhuka, kunyange kana chiri chikamu nzira.
5.) Arts uye Crafts: Kana vaviri zvichiitika kuda DIY zvirongwa (nezvemamwe Pinterest zvose vanoda uye vakomana namaturusi,) zvino uyu kunonakidza chirongwa kwamuri. Aine zvinhu shoma uye vamwe mushandirapamwe, unogona kuvaka nyore matumba ekunze chando kana imbwa dzimba mhuka rakarasika kwaunogara. Uyu muedzo mukuru ukama, kungofanana Ikea kutenga. Kana vaviri rudo unyanzvi, kusika zvimwe zvidimbu pamwe chete uye kupa navo chinhu nonprofit mhuka kuti okisheni kure kana kushandisa kurera ruzivo.
6.) Computers: Kana uri Tech-savvy, pa kubatsira nokusunungura kana matumba avo webpage magadzirirwo kana dzakadaro. Kana iwe Blog, nyora zvimwe nyaya pamusoro idzi munharaunda pfuma, kana kuvabatsira kuumba dzepaIndaneti ravo.
7.) nevamwe: Ndinoshanda mumisha inotarisira vakwegura muKentucky, uye ndinokuvimbisa kuti vagari vakawanda havana kuwana vashanyi vakawanda. Kana uine chipfuwo anekodzero unhu kuti basa iri, taura kuti boka mhuka kurapa kutanga muitiro kugadzirira hwechipfuwo wako kwokuzvipira. Tose tinoziva kuti zvinonyaradza mhuka kudyidzana kuri, saka wadii kupa kuti munhu kunyaradzwa? Funga kupa rubatsiro izvi kune mhirizhonga matumba, Foster vana, uye hospice varwere, wo. Musafunga chete katsi nembwa kuita basa iri, kana! Ndakaona bunnies, nguruve, uye kunyange nenjiva zvose kuita chikamu kwavo!
8.) Sports: Kana iwe mudiwa rudo vachiramba vachishingaira, funga kuronga uye kuita ane 5K kurera ruzivo pamusoro utsinye mhuka, kana kupa kufamba imbwa pane wokugamuchirwa chiitiko vemunzvimbo. Zvichida kunyange naHama mbwanana "rudzi" kana kakatsi Superbowl kubatsira menyu kuda Society. Muchava kubatsira masangano ari ravo apo kufara, uye izvozvo takunda-zvisamumirira.
9.) kugara: Our matumba mhuka makazara imbwa nekatsi dzinoda nokusingaperi dzimba, uye mapoka kununurwa achidisa kupandukira mhuka idzi kuitira kudzivirira euthanasia. Kana uri homebody uye vane imwe nzvimbo kuti pave mhuka kwenguva duku, kutaura matumba menyu mhuka uye mapoka kununurwa. Chii nani pane pakuponesa upenyu uye kuwana kutamba neshamwari itsva Negima?
Nakidzwa philanthropic zvinhu izvi sezvo vaviri, uye munoziva kuti pamwe uri kuchinja muupenyu mhuka vakakupoteredza.